किन आत्महत्या गर्छन् सुरक्षा अधिकारी ?
काठमाडौं, पुस २२ गते । कानुन कार्यान्वयनमा पहरेदारी गर्दै प्रहरीले समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । तर, अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरी संगठनभित्र कहिलेकाही नसोचिएका घटना हुन्छन् । नागरिकको सुरक्षामा खटिने प्रहरी संगठनभित्रका घटनाले नागरिकको सुरक्षा चासोमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
रुपन्देहीको भैरहवामा कार्यरत नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुशील यादवको आत्महत्या घटनाले प्रहरीको मानसिकता र नागरिकको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ । माघ १५ गते ५५ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश पाउने एसएसपी यादव राम्रो प्रहरी अधिकारीका रुपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो । डीआईजी बढुवाको प्रमुख दाबेदार यादवले जीवनमा सयौँ घटना र दुर्घटनालाई नजिकबाट नियाल्दै अन्यायमा परेकालाई न्यायको निम्ति अदालतको ढोका पटकपटक ढकढक्याउनुभयो । तर, आफैंले भने आत्महत्याको बाटो रोज्नुभयो ।
मोरङको उर्लावारी घर भएर सुनसरी जिल्ला अदालतमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार ओमप्रकाश खतिवडाले आफैँले बोकेको पेस्तोलले आफैंलाई गोली हान्नुभयो । २०७७ साल असार १६ गते गम्भीर घाइते हुनुभएका उहाँको उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारको क्रममा मृत्युभयो ।
प्रहरी भित्र देखिएका आत्महत्याका यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । समाजका विकृति, विसंगती र अपराधको अनुसन्धानमा खट्ने प्रहरी संगठन भित्रका यस्ता गम्भीर घटनाको भने प्रभावकारी अनुसन्धान हुन् सकेको छैन ।
आत्महत्या आफैँमा भयानाक सोच हो । मानिस किन आत्महत्या सोच्न पुग्छ ? प्रहरी संगठनमा तल्लो तहदेखि उच्च अधिकारीसम्मले किन आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ? यी गम्भीर प्रश्नमाथि अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ । जनस्वास्थ्यविद् डा.बाबुराम मरासिनी आत्महत्या आफैँमा भयानाक सोच भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न नसक्दा मानिसले यस्तो बाटो रोज्ने गर्छन् । तर, समस्याको समाधान खोज्ने कोशिस नगर्नु गलत हुने उहाँको ठहर छ ।
‘आत्महत्या आर्थिक, सामाजिक, मानसिक र वंशाणुगत हुन्छ । यसको ठोस परिभाषा छैन । यो मानिसको व्यक्तिगत भावनाको कुरा हो,’ डा.मरासिनीले भन्नुभयो, ‘आत्महत्या कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । सामान्यभन्दा सामान्य समस्याको समाधान गर्न नसक्दा अधिकांश आत्महत्याका घटना हुने गरेका छन् ।’
प्रहरी संगठनमा किन हुन्छ आत्महत्या ?
प्रहरी संगठनभित्र आत्महत्याका घटना हुनुका पछाडि थुप्रै कारण हुनसक्ने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको एउटा ठूलो संगठनभित्र आत्महत्याका घटना पटकपटक हुनुलाई सामान्य मान्नु नहुने उहाँको भनाइ छ । प्रहरी संगठनभित्र हुने यस्ता घटनामा सरकार र कर्मचारी जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संगठनभित्र थुप्रै प्रकारकार असन्तुष्टि हुनसक्छन् । कामको मूल्यांकन र समस्याको समाधानमा माथिल्लो पदमा रहेका व्यक्तिले चासो नदिए चित्त दुख्नेक्रम सुरुहुन्छ । पूर्वडीआईजी मल्लका अनुसार त्यहीक्रम बढ्दै जाँदा डिप्रेसनको अवस्था सिर्जना हुन्छ । ‘प्रहरी संगठन राज्यको ठूलो निकाय हो । यसमा धेरै मेहनत गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । प्रहरीमा कार्य दक्षता मूल्यांकन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ’, पूर्वडीआईजी मल्ल भन्नुहुन्छ, ‘तर, कहिलेकाही सही मूल्यांकन नहुँदा चित्त दुख्छ । चित्त दुख्दै जाँदा आफू काम गर्न लायक नभएको महसुस हुनसक्छ । त्यसले विस्तारै डिप्रेसनमा पुर्याउन सक्छ । जसले गर्दा उसलाई गलत निर्णय गर्न बाध्य पार्नसक्छ ।’
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल । तस्बिर फेसबुकबाट
पूर्वडीआईजी मल्लका अनुसार प्रहरीको पेशा एउटा बन्धन पनि हो । जसले परिवारसँग समय बिताउन र परिवारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका कहिल्यै प्राप्त गर्दैन । आफ्नो पारिवारिक र सामाजिक दायित्व पूरा गर्न नपाउँदासमेत चिन्ता बढ्ने र आत्महत्याको बाटोतिर धकेल्ने उहाँको भनाइ छ ।
मल्लका अनुसार प्रहरी कर्मचारी लामो समयसम्म परिवार भन्दा बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् । लामो समयसम्म परिवारभन्दा टाढा हुँदा बाहिरी सम्बन्ध मजबुत बन्छन् । तिनै सम्बन्ध विस्तारै तनावको कारण बन्ने र त्यसले मृत्युसम्म पुर्याउनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । यो विषयलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र समययमा बिदा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यसका लागि सकेसम्म सरकारले मिलाउने कुराहरु रहेकाले त्यसका लागि सरकार व्यवस्थापनमा चुक्ने गरेको उहाँले अरोप लगाउनुभयो । ‘प्रहरी कर्मचारी लामो समयसम्म परिवारदेखि टाढा बस्नुपर्छ । बाहिर बस्दा त्यहाँ फरकफरक खालका सम्बन्ध बढ्छन् । त्यही सम्बन्ध विस्तारै तनावको कारण बन्छन् र आत्महत्यासम्म पुर्याउन सक्छन्’, पूर्वडीआईजी मल्ल भन्नुहुन्छ, ‘यो विष्यमा सरकार गम्भीर नभए प्रहरी संगठनको समस्या समाधान हुन सक्दैन । यसका लागि समय समयमा परिवारसँग बस्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’
यता महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ प्रहरी संगठनभित्र हुने आत्महत्यामा प्रहरी संगठनको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ आत्महत्यामा संगठनको नभएर नितान्त व्यक्तिगत कारण भएको बताउनुहुन्छ । ‘प्रहरी संगठनभित्र आत्महत्याका एक–दुई वटा केश हुन् । काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र हेर्ने हो भने दैनिक चार–पाँच वटा आत्महत्याको घटना हुन्छन्’, खापुङ भन्नुहुन्छ, ‘प्रहरी पनि मानिस हो । उसका पनि व्यक्तिगत कुरा हुन्छन् । प्रहरी संगठनभित्र हुने आत्महत्याका घटना नितान्त व्यक्तिगत हुन् ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालकी मनोविद् डा. सजिता पौडेलका अनुसार सानोतिनो कुरामा आवेगमा आउने असफलता, आर्थिक क्षतिले एकाएक एकदम निराश हुने व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
आत्महत्या एक जटिल मनोसामाजिक समस्या भएकाले सबैभन्दा पहिले घर परिवारका मानिसले त्यसको पीडाबारे थाहा पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘मानसिक पीडाको कारण घर परिवारका सदस्यले थाहा पाउनुपर्छ । पीडाको कारण समयमै पत्ता लगाउन सकेमा कुनै पनि मानिसलाई आत्महत्या गर्नबाट रोक्न सकिन्छ’, डा. पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘यो कुनै रोग होइन, अत्याधिक तनावको कारण मानिस डिप्रेसनमा पर्ने र त्यसैको कारण आत्महत्या गर्ने स्थिति बन्छ ।’ प्रहरी संगठनमा हुने आत्महत्याका घटनालाई पनि उहाँले डिप्रेसनपछिको परिणामको रुपमा हेर्नुभएको छ । यसका लागि संगठनभित्र उनीहरुको कुरा सुन्ने वातावरण बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
प्रहरीको तथ्यांकमा १४ देखि ४४ वर्ष उमेरका मानिसले आत्महत्या धेरै गरेको देखिएको छ । नेपालमा प्रत्येक दिन ७ देखि १० जना मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । जसमा पुरुषको तुलनामा आत्महत्या गर्ने महिलाकै संख्या बढी देखिन्छ ।